Otu esi eweghachi egwuregwu na Steam na-enweghị ntaramahụhụ | Nzukọ mkpanaaka
Otu esi eweghachi egwuregwu na Steam na-enweghị ntaramahụhụ
Edere Ferreno | 10/11/2021 14:00 | Egwuregwu
Steam bụ otu n'ime nyiwe egwuregwu kachasị ewu ewu n'ụwa niile, yana ọtụtụ nde ndị ọrụ na-arụsi ọrụ ike na ya. Ọtụtụ nde ndị ọrụ na-azụta egwuregwu n'elu ikpo okwu a, egwuregwu nke ha nwere mmasị. N'ụzọ dị mwute, e nwere mgbe egwuregwu a na-adịghị ezute ihe anyị tụrụ anya ya na ọ dị anyị ka anyị na-emefusị ego anyị. N'ọnọdụ ndị a, ihe ọtụtụ na-eme bụ ịlaghachi egwuregwu ahụ na Steam.
Nke a bụ ihe ọtụtụ n'ime unu ghọtara n'ezie, na na a n'oge ụfọdụ ịchọrọ ịlaghachi egwuregwu na Steam. Ọtụtụ ndị ọrụ amaghị ka a ga-esi mee nke a. Na mgbakwunye, maka ọtụtụ ndị enwere nchegbu ọzọ na nke ahụ bụ na a ga-ata anyị ahụhụ. Ya mere, otu n'ime nnukwu obi abụọ bụ ụzọ ọ ga-esi kwe omume ịlaghachi egwuregwu na-enweghị ntaramahụhụ maka ya.
Ozi ọma ahụ bụ na nke a ga-ekwe omume. Mgbe ọ bụla anyị chọrọ ịlaghachi egwuregwu na Steam anyị nwere ike ime ya. Na mgbakwunye, enwere ụzọ isi mee nke a na-enweghị ntaramahụhụ, otu n'ime nchegbu kachasị nke ọtụtụ ndị ọrụ. Ihe dị mkpa n'ọnọdụ ndị a bụ iburu n'uche mgbe niile ihe bụ ọnọdụ nke ikpo okwu na-eguzobe, ka anyị wee mara otú anyị nwere ike isi mee nke a n'ụzọ kacha mma, ebe ọ bụ na ọ bụghị mgbe niile ka ọ ga-ekwe omume ịlaghachi egwuregwu ma nweta a. nkwụghachi maka ya..
1 Ọnọdụ maka ịlaghachi egwuregwu na Steam
1.2 Ịzụ ahịa n'egwuregwu
1.3 Ihe kpatara
2 Etu ị ga-esi laghachi egwuregwu na Steam
2.1 Nzọụkwụ ịgbaso
Ọnọdụ maka ịlaghachi egwuregwu na Steam
Dị ka anyị kwuworo, ihe dị oké mkpa na nke a bụ ịmata ihe ọnọdụ ma ọ bụ iwu bụ na ikpo okwu na-eguzobe. N'ụzọ dị otú a, anyị ga-enwe ike ịma ma a ga-ata anyị ahụhụ ma ọ bụ na ọ bụghị n'oge anyị na-ekpebi ịlaghachi egwuregwu ahụ nke na-emeghị ka anyị kwenye na anyị na-eche na ọ bụ ihe efu nke ego anyị. Irube isi n'iwu ndị a pụtara na a gaghị enye anyị ntaramahụhụ mgbe anyị na-eme nlọghachi a.
Iwu mbụ nke ikpo okwu na-eguzobe na nke a doro anya. Ihe na-erughị ụbọchị iri na anọ ga-agaferịrị (izu abụọ) ebe ị zụrụ egwuregwu ahụ na akaụntụ Steam gị. Ọzọkwa, ị ga-abụrịrị egwuregwu a opekata mpe awa abụọ. Ya bụ, ikpo okwu chọrọ igbochi gị ịzụrụ egwuregwu ahụ, na-emefu otu izu na-egwu egwu na-adịghị akwụsị akwụsị wee kwuo na egwuregwu ahụ enweghị mmasị, mana n'eziokwu ị na-egwuri egwu awa 40 ma jiri ya niile.
Ọ bụrụ na ị na-agbaso iwu abụọ a: ọ na-erughị ụbọchị 14 ma ị na-egwu ihe na-erughị awa 2, mgbe ahụ ị nwere ike ịlaghachi egwuregwu ahụ na Steam n'enweghị ntaramahụhụ. Kedu ihe ọzọ, Iwu a metụtakwara egwuregwu ndị ahụ anyị zụrụ tupu ha azụta. N'okwu a kapịrị ọnụ, oge nke ụbọchị 14 ma ọ bụ awa abụọ ahụ na-amalite ịgụta site na ụbọchị mmalite nke egwuregwu ahụ, ọ bụghị site na ụbọchị ị zụrụ ya, dịka i nwere ike iche n'echiche, n'ihi na n'ọtụtụ oge ọnwa na-aga. ebe ọ bụ na anyị ebula ụzọ zụta ya ruo mgbe a ga-ewepụta ya n'ahịa.
Ịzụ ahịa n'egwuregwu
N'aka nke ọzọ, n'ime Steam, a na-enyekwa anyị ohere ịkwụghachi azụrụ ndị ahụ anyị mere n'ime egwuregwu ahụ n'onwe ha, ihe ọtụtụ ndị ọrụ na-eme. Nke a bụ ihe metụtara ịzụrụ ihe ndị anyị mere n'ime egwuregwu ahụ n'oge mbụ 48 awa mgbe ịzụrụ. Ọ bụ ezie na nlọghachi a bụ ihe ga-ekwe omume naanị ma ọ bụrụhaala na ihe a na-ekwu na-emebeghị, gbanwee ma ọ bụ anyị bufee ya. Yabụ na ọ dị mkpa na anyị ejibeghị ya, ebe ọ bụrụ na ego ahụ efughị ​​anyị, agaghị anabata nloghachi ya site na Valve.
Banyere egwuregwu ndị ọzọ dị n'elu ikpo okwu, ọ bụ ihe ga-adabere na onye nrụpụta ọ bụla. Ọ bụghị iwu na n'ime Steam ịgbalite nkwụghachi a maka ịzụrụ n'ime egwuregwu ahụ, yabụ ị ga-ahụ egwuregwu nke ị gaghị enwe nsogbu ịrịọ ma nweta nkwụghachi a, ebe ndị ọzọ ọ bụ ihe na-agaghị ekwe omume, dịka ọmụmaatụ. Ugbu a, ọ pụtaghị na Valve nwere atụmatụ ime ka ọ bụrụ iwu, yabụ na anyị agaghị enwe ike ịnweta nkwụghachi ahụ mgbe niile, ọ dị nwute.
Mgbe anyị chọrọ ịlaghachi egwuregwu na Steam, na usoro iweghachi ya, a ga-ajụ anyị ajụjụ ụfọdụ. Ihe dị mkpa na usoro a bụ ịkọwapụta ihe kpatara ya maka anyị ndị na-enyeghachi egwuregwu ahụ ma chọọ ị nwetaghachi ego anyị. Ọ bụ ezie na ọ bụ ihe a na-ajụkarị ndị ọrụ, ọ bụghị ihe ga-emetụta ma ọ bụ na-emetụta nlọghachi a, na udo nke obi ọtụtụ.
Nke a pụtara na anyị nwere ike laghachi ọbụna egwuregwu a ka ewedara ala Ọ bụrụ na anyị egwuri egwu (ihe na-erughị awa abụọ), n'ihi na anyị chọrọ ịzụta ya mgbe ahụ na ọnụ ahịa mbelata. Ọ bụ ezie na nke a ga-ekwe omume, site na ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya na-adọ aka ná ntị banyere ụdị omume a ma na-azọrọ na ha maara mmejọ. Ya mere, profaịlụ ndị ahụ na-eme nke a mgbe nile nwere ike inwe nsogbu. Ndị ọrụ ndị ọzọ agaghị enwe nchegbu. Nlaghachi site n'oge ruo n'oge na nke a ekwesịghị ịkpata nsogbu na Valve.
Etu ị ga-esi laghachi egwuregwu na Steam
Ọ bụrụ na anyị enyochala iwu e hibere iji weghachi egwuregwu ahụ na Steam ma anyị na-agbaso ha niile, mgbe ahụ anyị dị njikere ịmalite usoro a. Ọ bụ usoro dị mfe, nke nwere ike ime n'ọtụtụ ụzọ. Ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya na-ahapụ anyị ụzọ anyị ga-esi mee ya, ọ bụ ezie na nke ha na-akọwa dị ogologo oge, ebe ọ bụ na ha na-ezigara anyị na ibe nkwado nke egwuregwu site na ụdị weebụ ya na usoro ndị ọzọ dị mkpa. Ozi ọma ahụ bụ na enwere ụzọ dị mfe na ngwa ngwa iji weghachi egwuregwu ahụ na akaụntụ anyị. Yabụ na anyị nwere ike iji ụzọ a weghachi ya. Nke a bụ usoro anyị ga-eso.
Ihe mbụ anyị ga-eme na nke a bụ ịbanye n'ọbá akwụkwọ egwuregwu Steam anyị. N'ime ya, anyị ga-achọ egwuregwu ahụ anyị chọrọ ịlaghachi wee tinye profaịlụ nke egwuregwu a. Ọzọ anyị ga-pịa na nkwado njikọ, nke anyị ga-ahụ na kọlụm n'aka nri nke egwuregwu profaịlụ. Ime nke a bụ ihe na-enye anyị ohere ịnweta nkwado kpọmkwem metụtara egwuregwu a n'elu ikpo okwu.
Ozugbo anyị nọ n'ime ya, ọ bụrụ na anyị na-agbaso ọnọdụ nloghachi, anyị ga-enwe ike ịhụ nhọrọ ahụ na-egosi na ihuenyo. Nhọrọ a na-egosi na ndepụta nsogbu wee pụta na aha "Ọ bụghị ihe m tụrụ anya". Ọtụtụ ndị ọrụ na-achọ aha dị ka nloghachi ma ọ bụ nkwụghachi, mana ọ bụ nhọrọ "Ọ bụghị ihe m tụrụ anya" ka anyị ga-pịa, ka anyị wee malite usoro a nke iweghachi egwuregwu ahụ. Ị nwekwara ike iji nhọrọ "Azụtara m nke a na mberede", ma ọ bụrụ na dịka ọmụmaatụ, ịmela egwuregwu na-ezighị ezi mgbe ịzụrụ otu. Nke ọ bụla n'ime nhọrọ abụọ a ga-enye gị ohere ịga n'ihu na usoro nlọghachi egwuregwu a.
Na windo na-esote anyị ga-enweta nhọrọ ọhụrụ. Ọ bụrụ na anyị zutere ọnọdụ ndị ahụ Steam guzobere (anyị zụtara egwuregwu ahụ ihe na-erughị izu abụọ gara aga ma anyị na-egwu ihe na-erughị awa abụọ), mgbe ahụ, anyị nwere ike ịga n'ihu na usoro ahụ. Ị ga-ahụ nhọrọ a na-akpọ Ọ ga-amasị m ịrịọ nkwụghachi, nke bụ otu anyị ga-esi pịa ya. Site n'ime nke a, anyị ga-enweta ihuenyo nloghachi nke egwuregwu a n'elu ikpo okwu.
Steam ga-egosi anyị na ihuenyo na-esote menu ebe anyị nwere ọtụtụ nhọrọ emebere iji hazie nkwụghachi ahụ. Nzọụkwụ mbụ na-eche na anyị ga-ahọrọ ụzọ anyị chọrọ ka e weghachi ego ahụ. Enyere anyị nhọrọ dị ka ịhọrọ otu ụzọ ịkwụ ụgwọ anyị na-eji maka ịzụrụ gị, na-akwụghachi ego ahụ ozugbo na obere akpa na Steam (ya mere ọ dị maka ịzụrụ n'ọdịnihu) ma ọ bụ iji PayPal, dịka ọmụmaatụ. Anyị ga-ahọrọ nhọrọ nke anyị chọrọ ma ọ bụ nke kacha dabara anyị.
Mgbe ahụ, anyị ga-ahọrọ ihe mere anyị ji chọọ ịlaghachi egwuregwu ahụ. Anyị ga-ede n'ime igbe na-egosi na ihuenyo, na mgbakwunye na ịhọrọ otu n'ime nhọrọ ndị anyị nwere na nchịkọta nhọrọ ahụ n'ime ihuenyo ahụ. Ozugbo anyị dechara ma ọ bụ họrọ ihe kpatara nloghachi egwuregwu a, anyị nwere ike pịa bọtịnụ na-ekwu Send arịrịọ. Site na usoro ndị a, anyị agwụla usoro ahụ dum wee ziga arịrịọ anyị ịlaghachi na Steam, nke bụ onye ga-enyocha ya mgbe ahụ. Ndị ọrụ ụlọ ọrụ ahụ ga-enyocha arịrịọ ahụ wee mee ka anyị mara site na email ma ha anabata ya ma ọ bụ na ha ekwetaghị, yabụ anyị mara ma anyị ga-enwetaghachi ego anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Egwuregwu » Otu esi eweghachi egwuregwu na Steam na-enweghị ntaramahụhụ
Otu esi ekekọrịta ọbá akwụkwọ Steam na ndị egwuregwu ndị ọzọ
Kedu ihe bụ ịntanetị nke ihe: uru na ọghọm